Friday 17th of September 2021 / 12:28:30 AM
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिंदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, वा त्यसलाई असाध्यै जटिल वनाईन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि
विहे गरेर भित्र्याएकी श्रीमतीलाई पहिलो दिन नै साथीसँग यौन सम्बन्ध राख्न लगाएपछि…
भनिन्छ वैवाहिक सम्बन्ध भनेको पवित्र सम्बन्ध हो । दुई आत्मा तथा मनको मिलन हो । तर, भनाईलाई भारतको यूपीमा भएको एक घटनाले झुटो ठहर गरिदिएको छ । यूपीको बाराबंकी भन्ने ठाउँमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई लज्जित बनाउने घटना भएको छ ।
जहाँ एक पु
जागिर पाउने आशामा कतिको यौन तृष्ना मेटाए तर मेरो जीवन फेरिएन,एकचोटी पढ्नुहोस कोठीमा पुगेकी यी महिलाको जीवन कहानी
‘पहिले त उनी कहिलेकाँही कोठीमा आउने गर्थे । कहिले मसँग त कहिले अन्य महिलासँग बस्थे’
म एक सन्तानकी आमा हुँ । लगभग दुई वर्ष भयो, मैले आफ्नो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको । अर्को एक पुरुषसँग माया बसेकाले दुवै जनाको सहमतिमा करिब १५ महिना लगातार यौन सम्पर्क राख्यौँ र दुई महिनापहिले ऊ पनि वैदेशिक रोजगारीमा गयो । त्यसयता मैले कसैसँग सम
मानव यौन प्र
हालै गरिएको एक अध्ययनले बताएअनुसार सम्बन
धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पु
म २८ वर्षकी भएँ म साह्रै पातली छु , मलार्इ मोटाउन साह्रै मन लागेको छ ? के योनिमा वीर्य झार्दा मोटाइन्छ ?
म २८ वर्षकी भएँ । विवाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमान्ले जब वीर्य योनिमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमान्ले योनिमा झा
हरेक पुरुषले जानी राखौं :महिलाहरुले तिब्र यौन इच्छा हुँदा देखाउने यी ४ व्यवहार
सत्य हो कि महिलाहरुलाई बुझ्न अप्ठेरो छ ।, तर जब आफ्नो भावना र इनर फिलिंग (भित्रि इच्छा) व्यक्त गर्ने कुरा गर्छन तर त्यहाँ शब्दहरुको सट्टा नन भर्बल कम्यूनिकेशन अर्थात इशाराको प्रयोग गर्छन् । यस्तो बेला पुरुषका लागि यो सांकेतिक क्रियाकलाप बुझ्न गाह्
एजेन्सी, तपाई कत्तिको सेक्स गर्न मन पराउनुहुन्छ ? सातामा एक, दुई या तीनपटक ? त्यसो त सेक्स जोडीको अवस्था, वातावरण तथा मुडमा पनि भर पर्छ । समय-समयमा सार्वजनिक हुने सेक्सबारे गरिएका अध्ययनमा सेक्स पुनरावृत्तिबारे पनि विभिन्न धारणा
दरबारमार्ग प्रहरी प्रभागभन्दा दुई सय मिटर पश्चिममा अवस्थित ठमेलको मध्यभागमा सामुदायिक प्रहरीको कार्यालय छ, जुन भगवतीबहाल ठीक अगाडि पर्छ । त्यहाँभन्दा तीन सय मिटर टाढा सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालय छ ।
त्यहाँ नजिकै थुप्रै गेष्ट हाउसहर
म हातमा एक गिलास दूध लिइ
शारीरिक सम्बन्ध राख्नुका विविध फाइदा पनि रहेको छ । वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्द
तपाईंहरुलाई थाहा नै छ रातको बिबाहमा रमाईलो हुन्छ । हामी त्यहाँपुग्दा सबैजना आ आफ्नै तालमा रमाइलो गरिरहेका थिए । बुढापाकाहरु मदिराको जोसमा यानी माया‍‍‍‍..... भाकामा गित गाउदै थिए हामी चाहिँ अलि नजिक बसेर जाड खाँदै रमाईलो गर्दै
के हो यौन विचलन ? [ किन बढ्दै छ यौन विचलन ? ]
अनलाइन दर्पण 2018-01-26
यौन सबैको अनिवार्य आवश्यकता हो । स्वस्थ यौन व्यवहारमा संलग्न जोडीले आपसमा स्वीकृत विधि र व्यक्तिबाट यौन क्रियाकलापको आनन्द अनुभूत गर्छन् । यस्तो व्यवहारमा कुनै एक जनालाई आफूलाई यौन सम्पर्क गर्न दबाब दिएको अनुभूति हुनु हुँदैन त्यस्तै यौनसम्पर्कपछि